Onye Mgbapụta Kanye West anaghị eso nne di ya bụ Chris Jenner na-emekọrịta ihe
Taa, n'ime akwụkwọ akụkọ ahụ, e nwere ihe ọmụma na onye na-emepụta ejiji na onye na-egwu egwu Kanye West adịghị eso nne di ya Chris Jenner. A nuru ya na ihe kpatara esemokwu ahụ bụ àgwà na-ekwesịghị ekwesị nke onye a ma ama, nke na-ebute ebubo megide ezinụlọ nke nwunye ya Kim Kardashian. Njikọ dị otú a n'onwe ya Jenner enweghị ike ịhapụ ya na n 'ụzọ ọ bụla na-agbalị ịtụgharị uche na West.
Onye nyocha ahụ kwuru banyere mmekọrịta dị n'etiti Chris na Kanye
Taa, na mgbasa ozi ndị mba ọzọ, e nwere nyocha nke onye nyocha nke maara ezinụlọ Kardashian nke ọma. Isi iyi ahụ kwuru na West na-emejọ mgbe nile, na-eme ka ọ bụghị naanị nwunye ya bụ Kim, kama ndị ikwu ya. Lee okwu nke ezigbo enyi nke rapper na nwunye ya:
"Na-egosi na ndị ikwu ya na-azọrọ ya mgbe niile. Nwunye ya na-anwa ịchịkwa usoro a, ma ọ dịghị ihe si na ya pụta. Onye na-ekiri egwu ekweghị na Kim nwere ike imetụta ya na ọnọdụ ahụ n'ozuzu ya. Site na ya ka m na-anụ ugboro ugboro na ọ na-ewere onwe ya dịka onye maara ihe na Chineke, onye ọ dị mwute na ọ dịghị onye na-amata. West nwere obi ike na ya nwere ike ime ọtụtụ ihe, ọ ga-emetụkwa ihe a nile. Kanye na-achọsi nwunye ya n'anya, mana o kwenyeghị na ọ dị mma, dịka ndụmọdụ ya. "
Mgbe nke ahụ gasịrị, isi iyi ahụ kwuru banyere mmekọrịta nke West na mama nne ya:
"Mgbe ọ na-ahụ ihe ndị a nile na ezinụlọ ya, nne ya bụ Chris Jenner guzobere maka nchebe ya. Ọ dịghị amasị otú onye na-agụ egwú si emeso Kim, ọ gbalịkwara ichebe ya n'ụzọ ọ bụla. Chris kweere na Kanye kwesịrị ịkwanyere ya na ụmụ ya ùgwù. Ọ na-ewute ya ka ọ lee otú West si kpalie Kim, nakwa n'ihi enweghị ihe kpatara ya. Chris na-agba mbọ mgbe nile ka ọ ghara itinye aka na mmekọrịta nwa ya nwanyị na di ya, si otú a na-agbalị ịghọ ezi ọgọ, mana ndidi ya na-agba ọsọ. Ọ na-echegbu onwe ya banyere Kanye na Kim, n'ihi na ọ kwenyere na ha hụrụ ibe ha n'anya nke ukwuu ma ọ bụrụ na e nwere ezumike, mgbe ahụ maka nwa nwanyị, ọ ga-enwe nnọọ ihe mgbu. "
Chris Jenner na Kanye West
Kim Kardashian ga - abụ onye nwe ụwa mbụ na - enye onyinye site n'aka CFDA
Ụbọchị mama m na ezinụlọ Kardashian: foto archival, mmeto na nkwupụta nke ịhụnanya
Kanye na-arụsi ọrụ ike, ọ chọghịkwa izu ike
Ná ngwụsị akụkọ ya banyere ezinụlọ Kardashian-West, isi iyi ahụ kpebiri ịkọwa ihe kpatara arụmụka a na-adịghị mma nke onye na-ekwuchitere ya:
"Ndị maara Kanye maara na ọ bụ ezigbo onye na-egbu egbu. Onye na-ege ntị na-arụ ọrụ 24 awa n'ụbọchị, na-achọghị izu ike. Ọ bụ ya mere o ji nwee nkụda mmụọ na afọ gara aga, nke mere ka ọ daa mbà. Ihe dị ka nke a nwere ike ime ọzọ na ụda olu a na-atụ egwu ndị ikwu West. "
Emily Ratjakovski mere ka ndị Fans na-ese foto ndị ọzọ
Tess Holiday chọrọ ka e mepụta mma ọgwụ!
Sinead O'Connor dere ihe ngosi vidiyo nke abụọ site n'ụlọ ọgwụ ahụ
Alicia Silverstone na-agbahapụ di ya Christopher Jareki
Chandler Riggs na enyi nwanyị ya
Alessandra Ambrosio biara n'ememme ohuru ya ya na nwoke nwoke na umuaka abuo
Chris Hemsworth na Elsa Pataki
Dani Alves na Joanna Sanz ọ hụrụ n'anya agbamakwụkwọ na Ibiza
Ụbọchị izu nke ụdị ọgaranya na ndị a ma ama na Instagram
Ụdị ejiji Biedermeier
Twin T-shirts maka abụọ
Dystonia nke arịa ụbụrụ
Esi ewepu Asparkam?
Mgbapu nke tublopian tubes
Aka maka New Year 2016
Jennifer Aniston fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nwanyị di ya nwụrụ
Kwụsị itching maka nkịta
Mmiri beet dị mma ma dị njọ maka imeju
Prolactin bụ ụkpụrụ
Hemangioma nke azụ - ọgwụgwọ
Ginger jaket - na ihe ị ga-eyi na otu esi emepụta ihe oyiyi dị mma?
Mama Jennifer Lopez juru ndị na-eme ihe n'Ịntanet anya
Herpes - Mgbaàmà
Ọgwụgwọ helminths na ụmụaka
Enyemaka mbụ maka ọkụ ọkụ
Nri ọka CH
Kedu ka njikọ IVF si eme?